Kana Malls ikava Datacenters ... | Martech Zone
Kana Malls ikava Datacenters…
Svondo, June 29, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nezuro raive zuva rakakura pa Mukombe weBean. Patric akamira achibva Noobie, Doug Theis kubva Lifeline Datacenters uye gare gare pazuva, Adhama kubva Zvinyorwa NeKukumbira.
Lifeline Datacenters ine inotonhorera chaizvo, uye isinganzwisisike, nyaya munzvimbo yavo nyowani yeEastgate Mall. Indianapolis Business Journal yakaita nyaya kwavari pavakapedza kutenga, asi izvozvi nzvimbo yacho yave kurarama. Iyo izere-inoratidzirwa dhatententisi neese bhero uye muridzo, uye ini ndinotenda iyo yega Tier IV muIndiapolis - uye hombe mune midwest.
Mufananidzo kubva DeadMalls.com.
Eastgate Mall yakavakwa muma50 uye ikabudirira kuburikidza nema70's. Zvanga zviri zviri pamutemo akafa mushure memakore makumi mashanu yebasa. Yakavakwa pakukwirira kweNuke kuvaka-neUSSR, mamwe emall ane mabhuru epasi pevhu akavakwa nematare emitero panguva iyoyo. Saka - pano iwe une nzvimbo ine matani emamirimita, kuwana traffic, kuwanda kwemagetsi, jenareta, kutonhora, dzimba dzekubhomba ... uye nzvimbo yekutengesa inofa.
Chii chaunoita nemall isina chinhu?
Gadzira dhatacenter mairi, hongu! Handina chokwadi chekuti ndiani aive nechiratidzo chekutanga cheichi chirongwa, asi chakajeka - uye chinoshamisa. Ikozvino sezvo chikamu chikuru chevatengesi chaenda online, zvakatonhora sei kuti mall inoshandurwa kuita dhatacenter? Ndiyo yekupedzisira irony mubhuku rangu! Eastgate inogona kunge yakavhara ayo madhoo kune traffic tsoka makore mashoma apfuura, asi ine mukana wekumutsirwa mune imwe yeakanyanya, epamusoro-kutengesa, 'malls' munyika!
Ndiri kuzoedza kumisikidza nguva yekushanya naDoug muvhiki rinotevera kana zvakadaro. Ini handigone kumirira kuti vaone zvavakaita!
Tags: eastgate malllifeline data nzvimbo
Kutsvaga kweGoogle Saiti paSERP?
Iyo Yakanakisa Zano rekukudza yako Blog
Jun 29, 2008 pa6: 50AM
Iyo karma yemuzvitoro ndeyekuzvarwa patsva se data data… zvine musoro. Izvi ndizvo zvatinogona kudaidza "e-budism"?
Jun 29, 2008 pa8: 39AM
Ini ndaida Bean Cup uye kutaura newe Doug. Tinofanira kuzviita kakawanda. Uye ndiverenge mukati kana iwe ukawana kushanya kwe (iyo) iyo nyowani yedata reDoug!
Jun 29, 2008 pa10: 50AM
Ini ndinobvumirana ne e-budism.
Izvo zvinotyisa nezve nzvimbo yekutengesa! Ini ndaisaziva kuti Doug aive mune chimwe chinhu chakadai. Izvo zvinotyisa!
Jun 29, 2008 pa 5: 14 PM
Kutenda nekuzivikanwa, Doug. Ndakave nenguva yakanaka ndichikurukura newe naPatric nevashandi veBean Cup nezuro. Tichawana kushanya kweEastgate yakarongedzwa imi vakomana.